Ukuphendula izenzakalo zamuva, abantu abaningi bezibuza ukuthi edolobheni basonta eCrimea. Ababona kangaka, ngakho lonke uhlu kulula ukukhumbula. Ngakho, eCrimea yilezi: Armyansk, Alushta, Alupka, Belogorsk, Bakhchisarai, Inkerman, Yevpatoriya, Djankov, Krasnoperekopsk, Kerch, Saki, Simferopol, Sevastopol, Sudak, Stary Krym, Yalta, Feodosiya futhi Shelkino. Bonke ezithakazelisa kakhulu, kodwa kukhona eziningana yezinto ezithakazelisa kakhulu kulolu hlu. Ake sihlole kubo ngokuningiliziwe.
Cishe kuyo yonke imizi eCrimea has a lot of izinzuzo. Kodwa le ndawo nge kwesikhathi iba mnandi futhi ezikhangayo izivakashi. Siyini isizathu? Kwabe sekuvela ukuthi, isizathu ayixhomekile kuphela indawo enhle, uma isimo sezulu sisihle futhi umlando emangalisayo. Abantu lapha ngoba iningi labo hlalani emzini angaba namandla okuwunikela. Kukhona yokulala eshibhile, kodwa okuhle. Ngaphezu kwalokho, wonke umuntu angakwazi nijabula bona indlela ezikhanga kakhulu, kuyilapho bethulula hhayi ngokuphelele esikhwameni sakho. Futhi amabhishi zitholakala eduze coves ethokomele, yinto emnandi ngenxa yobuhle balo nokuhlala ubumsulwa.
Izivakashi bendawo nje ezindaweni ezifana balaclava, Lyubimovka Cossack Bay, Uchkuevka futhi Cape Fiolent. Futhi lokhu akumangalisi, ngoba bonke siqu ezikhangayo yayo. Abaningi ngisho nokuwabona lokho edolobheni eCrimea ... Yazi Sevastopol kuphela, futhi ukuthi kwanele. Indlela iyiphutha!
Ngo Uchkuevke kukhona amahhotela amaningi amancane, Villas, izindlu ozinikela, izikhungo zezempilo, kanye impesheni. Ngokuvamile, wonke umuntu angakhetha lonke ukunambitheka yakho.
Lyubimovka elitholakala eduze komfula okuthiwa Belbek. Eza lapha bonke: intsha kanye nemindeni, kanye abatshuzi. Into enhle kunazo zonke Ljubimovke - kuyinto amatshe nasogwadule olunesihlabathi amabhishi.
Fiolent - a lenhlonhlo eningizimu-ntshonalanga yale nhlonhlo. Libuye e Sevastopol. Ngaphezu Cape, abendawo ukubiza leli gama yonke indawo, esisuka ku amakhilomitha 10, lapho kukhona amahhotela amancane Amahhotela okunethezeka.
Balaklava - idolobha elincane kodwa amahle. Ngaphambili, yena waba isimo idolobha ehlukile eCrimea, futhi manje esiyingxenye Sevastopol. bay Local, ngaphandle ihaba, ubizwe omunye ukhululekile kakhulu futhi enhle oLwandle Olumnyama. Akuve ezijulile futhi ayibanzi, akumangalisi ukuthi azikho izimo eziphuthumayo.
Cossack Bay uphelele kubantu umndeni abafuna uphumule. Cishe ogwini eyakhelwe izimpesheni emahhotela amancane.
Blue bay kuphawuleka kakhulu yokuthi kukhona amanxiwa Battery 35 ubudala. Le ndawo ethuneni elilodwa elikhulu kakhulu ekusetshenzisweni amasosha, futhi unezinhlelo ukuze kwakhiwe isakhiwo yesikhumbuzo.
Lokhu edolobheni ikhona entshonalanga ogwini eCrimea, amakhilomitha ambalwa ukusuka oLwandle Olumnyama. Libuye libe encane, kodwa ethokomele kakhulu futhi basamukela. Futhi ubani odinga imizi enkulu eCrimea, lapho kukhona indawo enokuthula futhi omuhle kanje?
Akusiyo imfihlo ukuthi inhlabathi yendawo ewusizo yezifo eziningi: a rheumatism chronic acute, sezinzwa izifo uhlelo, ukuqaqamba kubangelwa imikhuhlane nezifo ezithathelwana ngobulili, scrofula. Ngaphezu kwalokho, ukwelashwa okunjalo okuwusizo kulabo amanxeba amadala noma waphuka. Futhi lokho ngeke lonke uhlu izifo, okuyindawo uphulukisa Saki odakeni.
Futhi kulo muzi kukhona amatshe futhi olunesihlabathi, futhi brine. Kuvele izivakashi eziyibonayo ungavakashela ibandla St-Eliya, spa epaki kanye edolobheni Museum. Kufanele futhi ishiwo ethempelini, imi esigcawini main futhi njalo uye yabakhanga zezivakashi. Wasemisela isitayela Russian-WaseByzantium. Futhi, izakhamuzi bayazigqaja epaki zabo, eyasungulwa ngo-1890. Ngokuvamile bonke abantu abajabule ngokuphumelelayo nezimo, kodwa uma umuntu hhayi aneliseke okuthile, angakwazi njalo ukukhetha kwezinye izindawo. By endleleni, ingabe uyazi emadolobheni amaningi indlela eCrimea? Nesishiyagalombili. Ngakho isinqumo enkulu ngokwanele.
echibini Local, isiphetho umSkithe
Kodwa emuva Saks. Endaweni usawoti echibini brine futhi kuyinto fount ngokudlulisa ewusizo. Phakathi nezinyanga zasehlobo, izivakashi eziningi ukuza lapha ukuze selashwe. Awukho omunye umuzi eCrimea musa ukuheha abantu abaningi nge yisiphi isifo. Ukungcola kunomphumela omuhle imisebenzi ebalulekile emzimbeni: ukuphefumula, izinga lokugayeka kokudla emzimbeni, kukhuthaza, kwegazi.
Wena fan yomlando? Phakathi Yevpatoria futhi Sakas kuyinto isiphetho lasendulo Kara-Tobe amaSkithe elakhiwa cishe ku BC IV leminyaka.
Yonke imizi eCrimea omkhulu, kodwa lena - iyisibusiso mbamba letimayelana nalesihloko izivakashi. Ungenza noma yini inhliziyo yakho ufisa: uphumule nje, aphathwe, ukubona, zazo, kholwa kimi, okuningi. Abantu sebeqalile ukubhukuda emuva ekuqaleni kuka May futhi uphela maphakathi no-ekwindla, uma kakade ngokugcwele jika yokuhlanza amagilebhisi.
Leli chweba lendawo idume ngobuhle bayo Amazing, okuyinto, uveze amaqiniso njengoba enjalo, akuvamile. umkhawulo wayo Alchak Cape kanye inqaba entabeni, lapho inqaba Genoese. Akukude, ngaphandle komuzi, kukhona entabeni okuthiwa ikhanda Ushukela, okuyinto kakhulu othanda abaqwali.
Esikhathini 20s leminyaka elidlule, Pike basungula njengoba edolobheni resort. Futhi ngemva kwempi, laqala ukusetshenziswa ezokwakha zokungcebeleka. Sudak - endaweni kuphela enhlonhlweni, okuyinto idume emabhishi ayo engavamile. Iqiniso ukuthi isihlabathi akuyona elula, futhi asebenza ngebhethri.
Manje ngoba sewuyazi ukuthi imizi basonta eCrimea, futhi bangakhetha ezikhanga kakhulu sokuzilibazisa. Enhlonhlweni lifana uzibuthe, izivakashi. Vakashela futhi ayindawo enhle.